ခရစ္စမတ်တွင်ထူးခြားသောအသံဆယ်မျိုး (၂) - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home တရားဒေသနာ ခရစ္စမတ်တွင်ထူးခြားသောအသံဆယ်မျိုး (၂)
Samuel Soe lwin 12:25:00 PM တရားဒေသနာ,
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ထိုသန့်ရှင်းသော ညအခါ သမယ၌ ကောင်းကင်ထက်ဝယ် ကောင်းကင်တမန်များ၏ ကျူးဧခြင်း အသံများပြည့်လျှံ နေကြောင်း သိရပါ သည်။
”ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူ ကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေအများတို့သည်ချက်ခြင်းထင်ရှား၍၊ ကောင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ် ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းကြီး တော်မူစေ သတည်း၊ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ လူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေသတည်း ဟုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍မြက်ဆိုကြ၏” (လုကာ၊ ၂း၁၃-၁၄)။
ထိုချီးမွမ်းခြင်းသည် ကောင်းကင်တမန်များမှ ချီးမွမ်းခြင်းသက်သက်မျှ မဟုတ်ပါ။ ထိုညတွင်ရှိခဲ့သော ချီးမွမ်းခြင်းကို ရှင်လုကာမှ သူငယ်တော်အား ဖူးတွေ့ပြီး နောက်တွင် ဤသို့ဆက်လက်၍မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည် ” သိုးထိန်းတို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနှင့်သည်အတိုင်း ကြားမြင်သမျှသော အကြောင်းအရာ ကိုထောက်၍၊ ဘုရားသခင်ကို အံ့ဩချီးမွမ်းလျက် ပြန်သွားကြ၏” (ရှင်လုကာ၊ ၂း၂၀)။
နွားစားခွက်တွင် သူငယ်တော်အားဖူးတွေ့ကြရာမှ အပြန်လမ်းတွင် သိုးထိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းလျှက် ပြန်သွားကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကိုယ်စားယတြာပေးချေတော်မူသော သူငယ်တော်ကို နွားစားခွက်တွင်မြင်ပြီးနောက် ချီးမွမ်းခြင်းမပြုဘဲ ပြန်မလှည့်သင့်ပါ။ “ကျွန်ုပ်တို့အဖို့အလို့ငှါ ကောင်းကင် ထက်ရပ်နန်းကိုစွင့်ပြီး အနိဌာရုံလောကသို့ အသက်စွန့်လှူရန်ဆင်းြွကခဲ့သည်” ဟု စာဆိုပညာရှင်တစ်ဦးမှ ဆိုဘူးပါသည်။
မြင်ယောင်ကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို လွန်စွာ ချစ်ခင်စုံမက်တော်မူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၊ ကိုယ်ကျင့် သီလ၊ ဒါနတရား၊ ဘဝနာ တရားများဖြင့် မရနိုင်သော အို၊ နာ၊ သေခြင်းကင်းရာဘဝကို တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးလှူကာ ကယ်ချွတ်ရာ အကျွတ်တရားလမ်း ဖွင့်ပေးတော် မူခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။
“အံ့ဖွယ်မေတ္တာ . . . . အကျွန်ုပ်အပေါ်ထားသည့်မေတ္တာ” ဟု ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးက ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ဘူးပါသည်။ ခရစ္စမတ်အခါသမယသည် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကျေးဇူး သိတတ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ရွင်မြူးခြင်းကျူးဧရာကာလ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ အဖိုးဖြတ်၍မရသော လက်ဆောင်အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ အဖို့အလို့ငှါ ဘုရားသခင်သည် ကြီးသောမဟာကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြုတော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ ခရစ္စမတ်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြုတော်မူသော မဟာအမှုကို ဆင်ခြင်ခြင်း အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည်ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားခြင်း၊ ကိုးစားခြင်းဖြင့်သာ အချိန်ကိုအသုံးချသင့် ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ထပ်မံကြားနာရသောအခြားအသံတစ်ခုမှာ ကာလတစ်ခုကြာသွားသည့်နောက်မှ အံ့ဩချီးမွမ်းခြင်း အသံဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ရှိမုန်သည် လောက၏ကယ်ချွတ်ရှင်ြွကလာခြင်းကို စောင့်မျှော်နေကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ထာဝရအရှင်ဘုရား သခင်သည် ရှိမုန်အားကယ်တင်ရှင်ကို မဖူးမြင် ရမီအသက်ဆီမီးစာ မကုန်ဆုံးရဟု ကတိထားတော်မူခဲ့ပါသည်။ နှစ်တွေကြာညောင်းလာသောကြောင့် ယခုအခါတွင် ရှိမုန်သည် အသက်အရွယ်ပင် ကြီးရင့် လာခဲ့ပါပြီ။
သူသည် စောင့်စားခဲ့ရသော အချိန်ကာလများအတွက် စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ကတိတော်ပြည့်စုံလာမည့်နေ့ကိုသာ စောင့်စားမျှော်လင့် နေခဲ့သူဖြစ်သည်။
စောင့်စားရခြင်း၏ အနေအထားကိုအားလုံးနားလည်ခံစားမိကြပါမည်။ နာရီ၊ နေ့ရက်၊ လ၊ နှစ်စသည့်စောင့်စားခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွင် ဘယ်နေ့ဆင်းခွင့်ရမလဲဟုသောအတွေးမျိုး၊ ဖုန်းသံမြည်လာမည့်အချိန်နာရီ၊ ဆုတောင်းထားခြင်းသည် နှစ်ကြာလာ သည့်တိုင်အောင် အဖြေမရ ရှိခြင်းမျိုး၊ စောင့်စားနေရသော်လည်း နေ့ကိုလစား၊ လကိုနှစ်စားဖြင့် ကုန်လွန်လာခဲ့သောအချိန်နာရီတွင် သင်မည်သို့ ဖြေသိမ့်မည်နည်း။ ခရစ္စမတ် ကာလသည် ဘုရားသခင်အပေါ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် စောင့်စားမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်း သတိပေးနေခြင်း လည်းဖြစ်သည်။ စကားတော်တို့သည် မုသာမရှိ ပကတိအမှန်ပြည့်စုံလာမည်မဟုတ်ပါလား။ စောင့်စားရခြင်းဟူသောအချိန်နာရီသည် ကုန်ဆုံး လွန်မြောက်ချိန် အမှန်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်ကြည့်ပါက ရှိမုန်သည် ဗိမာန်တော်အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လမ်းပြမှုရရှိသည့်အတိုင်း လာရောက်ခဲ့ သည်မှာ အစဉ် အလာသဖွယ် မပျက်မကွက်လာနေသည့်အကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။ လူကြီး၊ လူငယ်၊ အရွယ်မရွေး အားလုံးက ရှိမုန်အား သိမြင် ကြပါသည်။ လူအစုံများ အကြားတွင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မည်နည်းဟူသော မျှော်ကိုးရှာဖွေခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်လွန်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်တွေပင် အလီလီပြောင်းခဲ့ပါပြီ။ မာရိနှင့်ယောသပ်တို့သည် သူငယ်တော်ယေရှုအားချီပွေ့လျှက် ဗိမာန်တော်ကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သောအချိန်လည်း ရှိမုန်မပျက်မကွက် သိမြင်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် မယ်တော်မာရိလက်တော်တွင်ရှိသော သူငယ်တော်အား စောင့်စားမျှော်လင့်နေသည့် ကယ်တင်ရှင် ဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကို သိမြင်အံ့သောငှါ စစ်ဆေးပါတော့သည်။ ရှိမုန်မှ သူငယ်တော်အားဖူးတွေ့ပြီးနောက် ကြားရသော စကားအရာတွင် မယ်တော်မာရိ အဘယ်သို့ တွေးထင်မည်ကိုလည်း မှန်းဆ ကြည့်ပါ “ရှုမောင်သည် ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပိုက်၍၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလျက်။ အစိုးရတော်မူသောအရှင်။ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် ငြိမ်ဝပ်စွာစုတေ့ရသောအခွင့်ကိုကိုယ်တော်သည် ယခုတွင် ပေးတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏ လူဣသရေလ အမျိုးကို ချီးမြောက် စေခြင်းငှါ၄င်း၊ တပါးအမျိုးသား တို့ကိုလင်းစေခြင်းငှါ၄င်း၊ လူအမျိုးမျိုးတို့ ရှေ့မှောက်၌ ပြင်ဆင်တော်မူသော အလင်းတည်းဟူသောကယ်တင်သော သခင်ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်မျက်စီနှင့် မြင်ရပါ၏ မြွတ်ဆို၏” ( ရှင်လုကာ၊ ၂း၂၈-၃၂)။
ခရစ္စမတ်ကာလသည် လောကီလူသားများအတွက် အကြီးမြတ်ဆုံးသော အဖြေကိုသယ်ဆောင်လာကြောင်း သတိပေးစကားဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ စောင့်စားမျှော်လင့်နေမှုများသည် လွန်မြောက်သွားကြရမည်အမှန်ပေ။ ဘုရားသခင်အား စိတ်ချကိုးစားလျှက် စကားတော် အတိုင်း သစ္စာရှိသော ဘုရားကို မျှော်လင့်တတ်ပါစေ။
ရှင်လုကာ ၁းရ၂ တွင် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၏အဖဖြစ်သူသည် အာဗြဟံအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ထားရှိသော ကတိတော် ပြည့်စုံလာပြီး လောကီလူသားတို့အား မဟာရန်သူတော်လက်မှ ကယ်ချွတ်မည့်အကြောင်းကို ပြောဆိုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အသုံးပြုလျှက် လူမျိုးတကာ တို့အား ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားစေမည်ဟု ကတိတော်ထားရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။
ကယ်တင်ရှင်ဖွားမြင်လာခြင်းသည် ရှေးဘိုးဘေးများအပေါ်တွင်ထားရှိသော ကတိတော်များပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကတိသည် အာဗြဟံ လက်ထက်မှ အစအားလုံး အကြုံးဝင်ပါသည်။ တစ်ဖန် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှအစဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည် ( ကမ္ဘာ၊ ၃း၁၅)။ ထိုနေရာတွင် ကြားဝင် ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းကိုလည်း တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကတိတော်သည် လူသားအာဒံ သို့မဟုတ် ဧဝအားပြောကြားနေခြင်းလည်းမဟုတ် မြွေအား စကားဆို နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဟန်ဆောင် လိမ်ညာသောမြွေသဏ္ဌာန်အသွင်ဆောင်သူကိုအမှီပြုပြီးထားရှိသော ကတိတော်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုမြွေသည် လူသားအာဒံနှင့် ဧဝကိုလိမ်ညာလှည့်ဖြားခဲ့ပြီး ဘုရားကိုလွန်ကျူးစေခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လူသားတို့သည် ဘုရားစာရေ၊ တရား စာရေဟူသော အမင်္ဂလာများကိုခံစားရကာ မျက်မှောက်တော်မှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ထိုအပြစ်တရားကြောင့်လောကသည် သေခြင်းတရားကို ဆောင်ကျဉ်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် မြွေကိုခေါ်၍သင်သည် ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်၊ သားယဉ်၊ သားရဲ အပေါင်းတို့ထက် ကျိန်ခြင်းကို ခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းဖြင့်သွား၍မြေမှုန့်ကို တသက်လုံးစားရမည်။
သင်နှင့် မိန်းမ ကို၄င်း၊ သင်၏အမျိုး အနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုးအနွယ်ကို၄င်း ငါသည် ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမည်။သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်၊ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။မိန်းမကိုလည်း သင်၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ဝေဒနာကို ငါအလွန်များပြားစေမည်။ပင်ပန်းစွာဝေဒနာကို အလွန်များပြားစေမည်၊ ပင်ပန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍သားဘွားရမည်၊ ကိုယ်ခင်ပွန်း၏အလိုသို့လိုက်၍၊ သူ၏အုပ်စိုးခြင်း ကိုခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ.၏။ယောကျာ်းကို လည်း။ ထိုအပင်၏အသီးကိုမစားရဟုငါပညတ်သော်လည်း။
သင်သည် မယား၏စကားကို နားထောင်၍စားမိသောကြောင့်။ မြေသည်သင်၏အတွက် ကျိန်ခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏။မြေ၏အသီးကို တသက်ပတ်လုံး ပင်ပန်းစွာ စားရမည်။ ဆူးပင်အမျိုးမျိုး တို့ကိုလည်း သင်အဘို့မြေပေါက်စေမည်၊ လယ်၌ဖြစ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို သင်စားရမည်။ သင်ထွက်ရာမြေသို့ မပြန်မှီတိုင်အောင်၊ သင်၏မျက်နှာမှ ေြွခးထွက်လျက် အစာကိုစား ရမည်၊ အကြောင်းမူကား။ သင်သည် မြေမှုန့်ဖြစ်၍ မြေမှုန့်သို့ပြန်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာ၊ ၃း၁၄-၁၉)။
ထိုအရာအားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်ထားရှိတော်မူသော ကတိတော်နှင့် ပုရောဖက်ပြုသည့် အနာဂတဝံစကားတော်များသာဖြစ်သည်။ သားတော်သည် ကားတိုင်ထက်တွင် အပြစ်ေြွကးယတြာကိုပေးခြေခြင်းဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူမည့် မဟာအကြံအစည်တော်လည်း ဖြစ်တော်မူပါသည်။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းတည်းဟူသော မရဏာမင်းကို အနိုင်ပိုင်းချိုးဖဲ့တော်မူခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ခရစ္စအခါသမယတွင် နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာသည် စာတန်မာရ်နတ်သာဦးစွာခံစားရခြင်းလည်းမည်သည်။ မာရ်နတ်၏အမှုတို့ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းငှါ ခရစ်တော်ဘုရားသည် လူ့ဇာတိအသွင်ကို ဆောင်ခဲ့သည် ထိုအခါ သမယသည်ကား ခရစ္စမတ်ဟူသောအခါကာလတွင်ဖြစ်သည်။
ထိုအရာကား ခရစ္စမတ်အခါကာလတွင် ထူးခြားသောအသံသာဖြစ်သည်။ ထိုအသံတော်အား သေချာစွာနားစွင့်ကြည့်ပါ။ ထိုအသံသည် “ညှင်သာသည်” “သိမ်မွှေ့သည်” “အဝေးမှလာသောအသံဖြစ်သည်”သို့သော်လည်း နောက်ခံဖြစ်ရပ်သည် ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးသည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာကား ခရစ်တော်ဘုရားကို ကရာနီတောင်းကုန်း ထက်တွင် ထုနှက်သောအသံလာရာ တူသံများ သာဖြစ် သည်။
ခရစ္စမတ်အခါသမယတွင် ထိုအသံကိုကျွနု်ပ်ကြားနေရခြင်းမှာ ခရစ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသက်တော်ကိုစွန့်ရန်အလို့ငှါ သက်သက်ြွကလာ တော်မူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်၌ကလည်း ဤအကြောင်းအရာကို မိန့်မြွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ “မိမိအသက်ကို စွန့်၍ လူအများကို ရွေးခြင်းငှာ ကြွလာသည်” (ရှင်မဿဲ၊ ၂ဝး၂၈)။ တစ်ဖန်]အကြောင်းရှိ၍သာ ထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ} ( ရှင်ယောဟန်၊ ၁၂း၂၇) ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။
ကားတိုင်တော်အကြောင်းကို ခရစ်တော်ဘုရား၏ နွားစားခွက်တွင်းမှာပင်မြင်လို့ရနေပါပြီ။ ရှိမုန်သည် မယ်တော်မာရိနှင့် ယောသပ်ထံမှ သူငယ်တော်ယေရှုကို ချီယူတော်မူသောအခါတွင် ရှစ်ရက်သားမျှသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း “ရှုမာင်သည်လည်း သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ မယ်တော်မာရိအား ဤသူငယ်ကား ဣသရေလလူအများလဲမည်အကြောင်း။ အများထမည်အကြောင်း။ လူအများ တို့၏အကြံအစည်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါငြင်းခုံစရာဖြစ်မည်အကြောင်း ခန့်ထား သောသူဖြစ်၏။ ထိုမှတပါး သန်လျက်သည် သင်စိတ် နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည်ဟုမြွတ်ဆို၏ “(လုကာ၊ ၂း၃၄-၃၅) ဟုဆိုခဲ့သည်။
ထိုအရာများကို ဟေရှာယသည် ပုရောဖက်အရာဖြင့် ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် “မထီမဲ့မြင်ပြခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူ ဖြစ်၏၊ ငြိုငြင်သောသူ၊ နာကြည်းခြင်း ဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏၊သူတပါးမျက်နှာ လွှဲခြင်းကိုခံရသော သူကဲ့သို့ ဖြစ်၏၊မထီမဲ့မြင် ပြုခြင်းကို ခံလျက်ရှိ၍ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင် ဆောင်ရွက်လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၄င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမှု နှိမ့်ချ တော်မူခြင်းကို၄င်းခံရသောသူ ဖြစ်သည်ဟု ငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီ။ ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးသော အပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်ထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောကှု် သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက် လျက်ရှိကြ၏” ( ဟေရှာယ၊ ၅၃း၃-၅)။
ခရစ္စမတ်အခါသမယတွင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းတည်းဟူသော အသက်တာသစ်ကိုလည်း ရယူရင်း ကရာနီမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်စား ခံတော်မူခဲ့သော အသံတော်ကိုလည်း ကြားယောင်နိုင်ပါစေ။ ခရစ္စမတ်အခါသမယသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြွေးအတွက် ခရစ်တော်သည် အပြည့်အဝ ပေးခြေရန်အတွက် ကြွဆင်း လာခဲ့သည်၊ ထိုခရစ်တော်အား နွားစားခွက်တွင် သူငယ်တော်အဖြစ် အဝတ်နှင့်ပါတ်စည်းလျှက်ရှိနေသည်ကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
ထုနှက်သောတူသံများကြောင့် သင့်လက်ရှိခရစ္စမတ်မင်္ဂလာအခါသမယကို မပျက်ဆီးစေပါနှင့်။ အကြောင်းမှာ အခြားသော အသံပါသေးသည်။ ခရစ္စမတ် အခါသမယတွင် “ညှင်သာသည်” “သိမ်မွှေ့သည်” “အဝေးမှလာသောအသံဖြစ်သည်”သာမက စစ်မှန်သောအခြား အသံရှိနေပါသေးသည်။ ထိုအသံသည်ကား အပြစ်ဝဲဩဃတွင် နစ်မွမ်းနေသော အပြစ်နွံအကျဉ်းသားများအတွက် ထောင်တံခါးဖွင့်လစ်ခြင်း အသံဖြစ်သည်။
ချည်နှောင်မှုမှ လွတ်ထွက်မှုပေးသော အသံဖြစ်သည်။ လူသားတို့ဆင်နွဲလေတိုင်း အရုံှုးနှင့်သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသော သင်္ခါရတိုက်ပွဲတွင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အောင်မြင်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းယူလာပေးခဲ့ပါသည်။ အို၊ နာ၊ သေခြင်းတို့ကြီးစိုးရာကမ္ဘာမှ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူ အားလုံးအား မအို၊ မနာ၊ မသေရာတည်းဟူသော နန်းအမတကို ပို့ဆောင်ပေးမည့် တစ်ခုတည်းသော မဂ္ဂင်ဖေါင်ကူတိုးပင်ဖြစ်သည်။ “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏၊ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏” ( ယောဟန်၊ ၁၄း၆)။ သေခြင်းမာရ်ကို ခရစ်တော်ဘုရားသခင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် အပြစ်၏ကျေးကျွန်အဖြစ်ချည်နှောင်ခြင်းခံနေရသောသူများအား လွတ်ခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသူတို့ အတွက်ဝိညာဉ် မျက်စိကိုလည်းဖွင့်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။
ခရစ္စမတ်အခါသမယတွင် အောင်မြင်ခြင်းဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသောအသံကိုလည်းသေချာစွာနားဆင်ကြည့်ပါ။ထိုအသံကားအို၊နာ၊သေခြင်း ကင်းရာ မြတ်နန်း အမတရွှေပြည်ခရီးအတွက်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ ခရစ္စမတ်အခါသမယတွင် သေခြင်းမာရ်ကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သော ခရစ်တော်ဘုရား ပို့ဆောင် တော်မူသည့် တစ်ခုတည်းသော အသက်လမ်းသာဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောခရစ္စမတ်၏ အသံများကို မိတ်ဆွေကြားနိုင်ခွင့်ရပါပြီလား။ ထက်ကောင်းကင်ယံမှ ထွက်ပေါ်လာသောအသံ၊ ကယ်ချွတ်ရှင် ကြွလာချိန်တွင်ထွက် ပေါ်လာသောအသံ၊ သေခြင်းမာရ်ကိုအောင်မြင်သောအသံ။ ယခုအချိန်အခါတွင် ကျွနု်ပ်နားစွင့်နေသောအသံသည် အခြား အခြားသော ခရစ္စမတ်ဘိုးဘိုး၏ ခေါင်းလောင်းသံလည်းမဟုတ်၊ ကောင်းကင်တမန်မင်းအသံပေးလျှက် ြွကလာတော်မူသောအခါတွင် “အချိန်တန် ပြီ သည်နှစ်ခရစ္စမတ်မှာ အိမ်တော်ကိုပြန်လာ ပါတော့” ဆိုသည့် သခင်ဘုရား၏ စကားသံကိုသာ ကျွနု်ပ်သာ၍ စောင့်စားမျှော်လင့်နေမိပါသည်။
သည်နှစ်ခရစ္စမတ်အသံကိုသေချာစွာနားစွင့်နေမိပါရဲ့လား? ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်အတူ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပရန်အသင့်ရှိ နေပါရဲ့လား?
သခင်ဘုရား၏ ခေါ်ခြင်းကိုကြားမိပါရဲ့လား? ထိုအရာတို့သည် ယနေ့လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ စစ်မှန်သော ခရစ္စမတ် နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအရာတို့သည်ကား ခရစ္စမတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အသံများပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွနု်ပ်ထည့်သွင်းခြင်းမရှိခဲ့သော အခြား အသံတစ်ခု ကျန်ရှိနေပါ သေးသည်။ ထိုအသံကား သင့်အပြစ်များမှ နောင်တနှင့်အတူ သခင်ဘုရားရှေ့တွင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက်ပါဟု ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ သည်နှစ် ခရစ္စမတ်မှာ ခရစ္စမတ် အရှင် ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်အတူ ယခုဘဝနောင်ဘဝထာဝရလက်တွဲကာ ဘဝအောင်ပန်းဆင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။
by Samuel Soe lwin - 12:25:00 PM